ရခိုင်ပြည်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမီးဘေးသင့် အတွက် အလှူငွေသိန်းတစ်ရာ့လေးဆယ် ကျော်ရရှိခဲ့တာကြောင့် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရှိုင်း – Cele Oscar
ရခိုင်ပြည်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမီးဘေးသင့် အတွက် အလှူငွေသိန်းတစ်ရာ့လေးဆယ် ကျော်ရရှိခဲ့တာကြောင့် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရှိုင်း
March 20, 2021 By L YC Knowledge
သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆို တတ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အဆိုတော်လေးဖြစ်တဲ့ရှိုင်းကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ရှိုင်းဟာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရော ပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင် ရခိုင်ပြည်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်း မီးဘေးသင့်အတွက် လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အလှူငွေ ကောက်ခံကာလှူဒါန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ရှိုင်းဟာသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ “ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်ဗျာ . . . 🙏🏻🥺ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည် ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်း မီးဘေးသင့် အတွက် အလှူခံ post တင်ပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး အလှူရှင်တွေ အားရပါးရ ဝိုင်းလှူလိုက် ကြတာ အခုလက်ရှိ ဒီ post တင်ချိန် အထိ အလှူငွေ စုစုပေါင်း သိန်း ၁၄၀၇၆၁၇၈ ကျပ် ( သိန်း တစ်ရာ့လေးဆယ် ခုနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်တစ်ရာခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်ကျပ် ) တိတိကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် . . . ဒါတောင် ငွေလွှဲလက်ခံတဲ့ ဘဏ် acc တွေ ဒီနေ့အတွက် amount limit ပြည့်သွားလို့ မလှူ လိုက်ရပဲ နောက်နေ့ ထပ်လှူမယ့်အလှူရှင်တွေ လာပြောထားတာတွေ ကျန်ပါသေးတယ် ။
“ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီမီးဘေးသင့် အတွက် အလှူငွေတွေကို ၂၀ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်ထိ ကောက်ခံ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် . . . ဘဏ်ထဲကအလှူငွေတွေကို အပြင်မှာ ငွေသားထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ရယ် ၊ များပြားလှတဲ့ အလှူရှင် စာရင်းတွေကို စီစစ်ဖို့ရယ်အတွက်လည်း အချိန်ယူရဦးမှာ ဖြစ်တာမို့ အလှူမှတ်တမ်းတွေ ၊ အလှူရှင်စာရင်းတွေကို သွားလှူပြီးတဲ့ အချိန်မှသာ အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပေးသွားပါ့မယ် ခင်ဗျာ . . . ရခိုင်ပြည်အတွက် စိတ်ပူပေးပြီး ကျွန်တော့်ဆီမှာ ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ အလှူငွေ ထည့်ဝင်ပေးကြတဲ့ အလှူရှင်တစ်ဦး တစ်ယောက်စီတိုင်းကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ် ခင်ဗျာ . . . 🙏🏻အဖရခိုင် ပြည်ကြီး အေးချမ်းပါစေ . . . #Save_Arakan…..” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်……။
သတင်းအရင်းမြစ်: SHINE’s Facebook page
သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို ကိုယျတိုငျရေးသားသီဆို တတျပွီး အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား အဆိုတျောလေးဖွဈတဲ့ရှိုငျးကို ပရိသတျကွီးအားလုံး သိကွမယျထငျပါတယျ။ အခုဆိုရငျလညျး ရှိုငျးဟာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရော ပါဝငျနတောဖွဈတဲ့အပွငျ ရခိုငျပွညျ၊မွောကျဦးမွို့နယျ၊တိမျညိုစဈဘေးရှောငျစခနျး မီးဘေးသငျ့အတှကျ လညျးတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အလှူငှေ ကောကျခံကာလှူဒါနျးပေးနတောဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာလေးကို ရှိုငျးဟာသူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ “ဝမျးသာလှနျးလို့ မကျြရညျတောငျဝဲတယျဗြာ . . . 🙏🏻🥺ဒီနေ့ ရခိုငျပွညျ ၊ မွောကျဦးမွို့နယျ တိမျညိုစဈဘေးရှောငျစခနျး မီးဘေးသငျ့ အတှကျ အလှူခံ post တငျပွီးတဲ့ အခြိနျကစပွီး အလှူရှငျတှေ အားရပါးရ ဝိုငျးလှူလိုကျ ကွတာ အခုလကျရှိ ဒီ post တငျခြိနျ အထိ အလှူငှေ စုစုပေါငျး သိနျး ၁၄၀၇၆၁၇၈ ကပျြ ( သိနျး တဈရာ့လေးဆယျ ခုနှဈသောငျးခွောကျထောငျတဈရာခုနှဈဆယျ့ရှဈကပျြ ) တိတိကို လကျခံရရှိခဲ့ပါတယျ . . . ဒါတောငျ ငှလှေဲလကျခံတဲ့ ဘဏျ acc တှေ ဒီနအေ့တှကျ amount limit ပွညျ့သှားလို့ မလှူ လိုကျရပဲ နောကျနေ့ ထပျလှူမယျ့အလှူရှငျတှေ လာပွောထားတာတှေ ကနျြပါသေးတယျ ။
“ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ဒီမီးဘေးသငျ့ အတှကျ အလှူငှတှေကေို ၂၀ ရကျနမေ့နကျပိုငျးလောကျထိ ကောကျခံ ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ . . . ဘဏျထဲကအလှူငှတှေကေို အပွငျမှာ ငှသေားထုတျယူဖို့အခကျအခဲတှကေို ဖွရှေငျးဖို့ရယျ ၊ မြားပွားလှတဲ့ အလှူရှငျ စာရငျးတှကေို စီစဈဖို့ရယျအတှကျလညျး အခြိနျယူရဦးမှာ ဖွဈတာမို့ အလှူမှတျတမျးတှေ ၊ အလှူရှငျစာရငျးတှကေို သှားလှူပွီးတဲ့ အခြိနျမှသာ အတတျနိုငျဆုံး အခြိနျနှငျ့ တပွေးညီ တငျပေးသှားပါ့မယျ ခငျဗြာ . . . ရခိုငျပွညျအတှကျ စိတျပူပေးပွီး ကြှနျတေျာ့ဆီမှာ ယုံယုံ ကွညျကွညျနဲ့ အလှူငှေ ထညျ့ဝငျပေးကွတဲ့ အလှူရှငျတဈဦး တဈယောကျစီတိုငျးကို ရငျထဲကနေ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ပွောကွားလိုပါတယျ ခငျဗြာ . . . 🙏🏻အဖရခိုငျ ပွညျကွီး အေးခမျြးပါစေ . . . #Save_Arakan…..” ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ……။
သတငျးအရငျးမွဈ: SHINE’s Facebook page
အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လှိုင်သာယာ ကပြည်သူတချို့အတွက် တတ်နိုင် သလောက်လှူဒါန်းမှုပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်